‘कान्छी’ औँलाले तपाईको स्वभावबारे के भन्छ ? जान्नुहोस् | suryakhabar.com
Home विचित्र संसार ‘कान्छी’ औँलाले तपाईको स्वभावबारे के भन्छ ? जान्नुहोस्
‘कान्छी’ औँलाले तपाईको स्वभावबारे के भन्छ ? जान्नुहोस्
on: २४ बैशाख २०७५, सोमबार १४:२१ In: विचित्र संसारTags: No Comments
काठमाडौं । प्राचिन पढाई प्रविधीअनुसार हातको सानो औंलाले हाम्रो चरित्रबारे धेरै भन्न सक्ने कुरा सुन्दा हामीलाई अनौठो लाग्न सक्छ । आज हामी तपाइँलाई दक्षिण कोरीयाली विधिबारे जानकारी दिन्छौं । जस्ले गर्दा तपाइँले मानिसको सानो औंला हेरी त्यस मानिसको बारेमा धेरै कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ । औंलाको पढाईका लागि प्रमुख कारक आकार र लम्बाइ हुन् ।
प्रत्येक औंलामा तीन भाग हुन्छन् । यी भागका आधारमा व्यक्तित्वको जाँच परख गर्न सकिन्छ । कुनै भाग लामो भयो भने अरू दुई भाग छोटा हुन्छन् ।
जसको वर्गीकरण तल गरिएको छ:
२) साधारण औंला [ Normal finger ]: यस्मा सानो औंला साहिंली औंलाको जोर्नी सम्म पुगेको हुन्छ । यीनीहरु परिपक्व र सन्तुलित व्यक्तित्व भएका हुन्छन् ।३) लामो औंला [ Long finger ]: यस्ता औंला भएका व्यक्ति जोशिलो , आर्कषक र उत्साहित हुन्छन् ।
९)तपाईंको कान्छी औंलामा टुप्पोको भाग अधिक लामो छ भने तपाईंप्रति मानिसको अत्यधिक आकर्षण हुन्छ ।
१०)तपाईंको कुरा गर्ने तरिकाले पनि मानिस प्रभावित हुन्छन् । तपाईं आफैं पनि मानिसलाई गहिराइका साथ जाँचपरख गर्न सक्नुहुन्छ ।
११)कान्छी औंलाको बीचको भाग टुप्पो र फेदको भागभन्दा लामो भएमा त्यस्तो व्यक्ति अर्काको हेरचाह गर्ने किसिमको हुन्छ । आफूभन्दा अघि अर्को व्यक्तिलाई उनीहरू ध्यान दिन्छन् । यस्ता मानिस दुर्लभ हुन्छन् ।
११)कसैको कान्छी औंलाको फेदको भाग सबभन्दा सानो छ भने त्यस्तो व्यक्ति सबैप्रति बफादार हुन्छन् । यस्ता मानिस गफगाफ गर्न जान्दछन् ।
१२)कान्छी औंलाको तीनै भाग सानो छ भने पूरै औंला नै सानो हुन्छ । यस्तो व्यक्ति भीडमा हराउने किसिमका हुन्छन् । यिनीहरू भएनभएको कसैलाई थाहै हुँदैन । कम लोकप्रिय हुन्छन् यस्ता व्यक्ति ।
१३)टुप्पो र फेदको भाग लामो अनि बीचको भाग छोटो छ भनृ त्यस्तो व्यक्ति अत्यन्तै जिद्दी हुन्छ । उनीहरू कुनै पनि किसिमको परिवर्तन मन पराउँदैनन् ।
२४ बैशाख २०७५, सोमबार १४:२१